Gịnị bụ Organic SEO? | Martech Zone
Gịnị bụ Organic SEO?
Fraịde, Machị 7, 2014 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịghọta njikarịcha ihe nchọta, ị ga-akwụsị ige ndị ụlọ ọrụ ahụ ntị na-erite uru na ya ma mee ya ndụmọdụ Google A bụ nnukwu paragraf si ha Search Engine Optimization Starter Guide:
Ọ bụ ezie na aha ntuziaka a nwere mkpụrụokwu “igwe nchọta ihe nchọta”, anyị ga-achọ ịsị na ị kwesiri idobe mkpebi gị kacha mma n’ihe kacha mma maka ndị ọbịa na saịtị gị. Ha bụ ndị kachasị na-eri ọdịnaya gị ma na-eji engines ọchụchọ iji chọta ọrụ gị. Ilekwasị anya na tweaks a kapịrị ọnụ iji nweta ogo na nsonaazụ organic nke injin ọchụchọ nwere ike ghara ịnye nsonaazụ achọrọ. Ihe ochicho njini ka ichoro bu uzo kachasi nma nke saịtị gi n’iru mgbe ihu n’ihe ngosi n’ime igwe n’inyocha ihe, mana ndi n’azu ahia gi bu ndi oru gi, obughi igwe ihe ichoro.
Google nwere ndụmọdụ siri ike na ị na-ewere onye ndụmọdụ SEO ọzọ gị, kwa. Ndụmọdụ m nye ndị ahịa dị mfe… jiri ikpo okwu na ngwa ọrụ ndị Google nyerela, wee wuo, kekọrịta ma kwalite ọdịnaya ahụ site na nnukwu usoro ahịa. Nke a ozi sitere na SEO Sherpa gosipụtara atụmatụ ahụ nke ọma.
Otu ihe edetu na nke a, infographic ahụ na-adọ aka na ntị megide ọdịnaya abụọ. Ihe ntughari nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ịnweghị iji njikọ canonical mee ka ikike gaa n'isiokwu mbụ, mana Google anaghị ata ya ahụhụ.
Tags: akpaakaejijiọnụ ụzọ ụzọọdịnaya abụọgoogle +ederede zoro ezonri nri nrinjikọ mgbanwenjikọ ugbonjikọ spamarụpụta seoorganic seoakwụ ụgwọ blog postsakwụ ụgwọ njikọnjikarịcha ọchụchọsearch engine njikarịchaAmkpa ọdịnaya
Daalụ maka ịkekọrịta infographics Douglas! Naanị ya na-achikọta naanị ihe m chọrọ gbasara isi nke SEO.
Douglas, enwere m mmasị na isi banyere ịghara ịchịkwa engines ọchụchọ. Creatmepụta ọdịnaya dị mma dị ka ihe ọmụma infograhpics gị gosipụtara bụ ime ọrụ ahụ iji mepụta ọdịnaya bara uru nke na-eme Google obi ụtọ mana ọ dị mkpa karịa na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee ọ .ụ. Mee elu mee ala, ọ bụ banyere ndị na-agụ akwụkwọ. Ọ na-amasị ha ma nweta uru na ya, ha na-alọghachi ma na-ezo aka na ndị enyi ha. Ọtụtụ ndị na - azụ ahịa taa na - akụzi ngwa ngwa ngwa ngwa nke na - enweghị ike ịnọ. Ezi Ama. Daalụ maka ịkekọrịta.
Right now (na na na) - Akon Nhazi na ọchụchọ bụ egwuregwu ogologo oge na site na ahịa nke ọdịnaya. Enwere ole na ole (ma ọ bụrụ na ọ bụla) ngwa ngwa ngwa ngwa nke na-ewepụta nsonaazụ SEO na-adịgide adịgide na ntanetịime weebụ.
Daalụ maka ịkekọrịta nke a na ndị na - agụ akwụkwọ gị Douglas. Enwere m olileanya na ha ga-enweta uru na ya 🙂 James ~ SEO Sherpa
ọmarịcha post..n'ezie, naanị SEO SEO kwesịrị ịgbaso dị ka arụpụtara SEO ga-ewetara gị obere okwu ịga nke ọma mana ọ ga-eme ogologo oge. Organic SEO ewetara gị ezigbo ogologo oge.
Dee 2, 2014 na 2: 35 AM
Mkpokọta weebụ na-ewu na-enweghị nri keyboard na mkpa ọdịnaya - nke a bụ organic SEO? Nke a bụụrụ anyị ihe ọhụụ na ọ bụ ezigbo ozi! Na oge niile, ọtụtụ abanyela na SEO arụpụtara ma nke a bụ edemede, ọkachasị na organic kwesịrị ịbụ nke a ga-eji.